ပါတီဥက္ကဌ ဖြစ်သူက ဘိန်းရာဇာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့တိတိကျကျသိထားပြီးပြီ – Nyang Media
GN / လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဂဲနက်စ်
သေချာတာတစ်ခုက လက်ရှိအချိန်မှာ ဘာမှပြင်လို့မရတော့ဘူး။ ကျနော့် အနေနဲ့ တစ်သီးပုဂ္ဂလအဖြစ်ဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဆောင်ရွက်လို့မရတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ …
Myanmar Now က ဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့သည့် ” မြန်မာပြည်၏ လျှို့ဝှက်နက်နဲသော နိုင်ငံရေးပါတီ ဥက္ကဌ ” ( ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UDP) နှင်းဆီပါတီ ၏ ဥက္ကဌ အကြောင်း( သည်နေရာမှာ ဖတ်နိုင်) အား ဖတ်ရှုပြီးနောက် UDP ပါတီ၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး ဖြစ်သူ ဦးဂဲနက်စ် က ( ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UDP) နှင်းဆီပါတီ ၏ ဥက္ကဌ ဦးကျော်မြင့် အနေဖြင့် ၎င်း၏ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကို တိကျစွာရှင်းပြပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါ အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ် တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဂဲနက်စ် ကို ငြမ်းမီဒီယာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ညီညွှတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (UDP ၊ နှင်းဆီပါတီ) ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးအနေနဲ့ ပါတီ ဥက္ကဌ ရဲ့ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကို ရှင်းလင်းဖော်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘာများဖြစ်မလဲ။
UGN – ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဗျ။ ကျနော်တို့မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာ ကျနော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်ပေါ့။ ကျနော် အဲဒီပုံရိပ်ကို နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာ တည်ဆောက်လာခဲ့တာ။ နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာ ဒေသအကျိုးစီးပွား အတွက် ဆောင်ရွက်လာခဲ့တာပါ။ ကျနော်က ပြည်သူနဲ့ တစ်သားတည်းရှိထားတယ်ဗျ။ လူထုနစ်နာမယ့်ကိစ္စတွေ အကုန်လုံး၊ ဥပမာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းလိုမျိုးတွေမှာ လူထုနဲ့တစ်သားတည်းထောက်ခံတယ်။
နောက်တစ်ခုက နန်ကျင် တရုတ် – မြန်မာ စီးပွားရေးဇုန်ပေါ့။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကချင်တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့ သိမ်းဆည်းခံရတဲ့ မြေ (၆၅၀) ဧက ကိစ္စမှာလည်း ကျနော်က သူတို့ဘက်ကနေ ကူညီရပ်တည်ခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို၊ တစ်သျှူးငှက်ပျောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စမှာလည်း ဒေသခံပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်လာတဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုးပဲ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း ဒေသအတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ အဖွဲ့ရဲ့ ဥပဒေအကြံပေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျနော်တည်ဆောက်လာခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်၊ ကျနော်တို့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းကနေပြိုင်မယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ပုံရိပ်တွေရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ ပါတီဥက္ကဌရဲ့နောက်ကြောင်းရာဇဝင်၊ ပါတီရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက် ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိဘူး/ရှိတယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးကို ကျနော်ဖတ်ရှုရတယ်လေ။ ကျနော်က မီဒီယာအသိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း ဆက်စပ်မှုတွေရှိတယ်။ နာမည်ကြီးသွားခဲ့တဲ့ ဖားကန့်က သတင်းထောက် ဦးဇော်မိုးထက်တို့ကို ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်က တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာလည်း ကျနော်က ရှေ့နေတစ်ဦးအနေနဲ့ ဝင်ရောက်ဆောက်ရွက်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်အနှစ်ချုပ်ပြောချင် တာက ကျနော် ဒီလို ဒီလိုရပ်တည်လာခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးက ကျနော့်မြို့၊ ကျနော့်ပြည်နယ်အကျိုးစီးပွား အတွက်ရပ်တည်လာတာလေ။
အဲဒီတော့ မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒါကို သူရှင်းပြဖို့လိုအပ်တာပေါ့။ သူ့ကိုစွပ်စွဲထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ ငြိုးထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ သူဖြေရှင်း လိုက်ပြီဆိုရင် ဒီကိစ္စက ဘာမှပြဿနာ မရှိတော့ဘူး။ အဲဒါသူဖြေရှင်းရင်ဖြေရှင်းလေ၊ မဖြေရှင်းရင် ကျနော်တို့ရဲ့ တစ်သီးပုဂ္ဂလ အနေနဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ရပ်တည်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်မှာပေါ့။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဒီနေ့ (၂၄. ၉. ၂၀၂၀) ရက်စွဲနဲ့ ညီညွှတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (UDP ၊ နှင်းဆီပါတီ) က ထုတ် ပြန်တဲ့ကြေညာချက်က ဦးဂဲနက်စ်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကိုပြန်ဖြေရှင်းတာလို့ ယူဆလို့ရနိုင်သလား။
UGN – အဲဒီလိုတော့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်အနေနဲ့ လုံလောက်တဲ့အခြေအနေလို့တော့ မသတ်မှတ်သေးဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်ရဲ့တောင်းဆိုမှုအပေါ် သူ့ဘက်ကနေပြန်ပြီး ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်လာတာကို တော်တော်လေးဝမ်းသာပါတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်။ လက်ခံပါတယ်။
UDP / ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
ငြမ်းမီဒီယာ – တချို့က အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ‘ပါတီမဝင်ခင်ကတည်းက ပါတီအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့သင့် တယ်’ လို့ပြောနေကြတာတွေရှိတယ်။ သူတို့ပြောသလို ပါတီမဝင်မီက ဒီပါတီအကြောင်းကို မလေ့လာခဲ့ဘူးလား။
UGN – မှန်ပါတယ်။ သေချာတာပေါ့။ ပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတောင် နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင် သိခဲ့လို့လား။ ဒါက ကျနော့်ဘက်ကပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ချင်တဲ့အချက်ပေါ့။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင် UDP က NLD ပြီးရင် ဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်လာတာတောင် မနေ့တနေ့ကမှ သတင်းထရေးကြတာပါ။ ဟုတ်သလား၊ မဟုတ်ဘူးလား။ ကျနော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကလေ။
အဲဒီတော့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေက ပါတီဥက္ကဌနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းတဲ့အခါ ပါတီဥက္ကဌ ဖြစ်သူက ဘိန်းရာဇာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့တိတိကျကျသိထားပြီးပြီ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျနော်က ရှေ့နေတစ်ဦးလည်းဖြစ်သလို နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့လည်း ရင်နှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိတယ်လေ။ ဆိုတော့ ကျနော်သိထားတာက USDP အစိုးရလက်ထက်တုန်းက ပန်ဆေးကျော်မြင့်ဆိုတာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ရှိခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ဒီ ဦးကျော်မြင့်ဆိုတာက သူနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူး။ သူ့ကို စွပ်စွဲထားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးက ပန်ဆေးကျော်မြင့်၊ ဘိန်းဘုရင်ဆိုပြီးစွပ်စွဲထားတာပဲ။ အဲဒီတော့ ဘိန်းဘုရင် ဦးကျော်မြင့် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ ကျနော်တိတိကျကျသိထားပြီးပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျုံယွမ်ကျော်မြင့်နဲ့ပတ် သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ အခုမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ကိစ္စတွေက ကျနော်တကယ်မသိတဲ့ကိစ္စတွေပါ။
တောင်းဆိုရတဲ့အကြောင်းဟာ လူထုတွေ ကြားမှာ ဒွိဟဖြစ်နေတဲ့အချက်ကို အမှန်တကယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားအောင် ကိုယ့်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်က ရှင်းလင်းဖော်ပြနိုင်မယ်လို့ ယူဆပြီး …
ဒါနိုင်ငံရေး ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗျ။ စီးပွားရေးနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ပြောဆိုနေတဲ့ကိစ္စတွေသာဖြစ်တယ်။ Money Laundry နဲ့ပတ်သက် ပြီးပြောတဲ့ကိစ္စတွေရှိမယ်၊ တခြား Job နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့ကိစ္စတွေရှိမယ်။ အဲဒါတွေအားလုံး ဘယ်နေရာမှာမှ ယနေ့အချိန်ထိ တိကျခိုင်မာပြီး ဖော်ပြထားတာ တစ်ခုမှမတွေ့ရဘူး။
နောက်တစ်ခုက ကျနော်ကလည်း ဥပဒေသမားဖြစ်တော့ ကျနော့်ဘက်ကပြောလိုတာကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဗျ။ ဒီဟာမျိုးတွေ၊ ဒီဟာကြီး တွေ ဆောင်ရွက်နေတာမှန်ကန်ရင် မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ၂၀၁၀ မှာရော၊ ၂၀၁၅ မှာပါ ဘာဖြစ်လို့ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့လဲ။ ဆိုတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ Lawer Point ကနေ ပြောလိုတာက ဥပဒေနဲ့အညီ မှတ်ပုံတင်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်နေလို့ ကျနော့်ဘက်က ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာပဲဖြစ်တယ်။ ဒါပါပဲ။
ငြမ်းမီဒီယာ – ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး နဲ့ ပါတီကြားမှာ ခုလိုကိစ္စတွေဖြစ်သွားခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ ရှေ့ဆက်ဖို့ က ဘယ်လိုရှိနိုင်သလဲ။
UGN – ဒီဟာကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့နည်းဥပဒေအရ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ကန့်ကွက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့သက်တမ်းက ကျော်သွားပြီ။ ဆိုတော့ ပါတီက မကျေနပ်ဘူးဆိုလည်း မဲလက်မှတ်တွေအားလုံးက ရိုက်နှိပ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်ဗျ။ ဆိုတော့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပါတီ တွင်းကိစ္စအနေနဲ့ မည်သို့မည်ပုံဆောင်ရွက်မည်ဆိုတာကိုတော့ ပါတီတွင်းကိစ္စ Privacy အနေနဲ့ မပြောလိုဘူး။
သေချာတာတစ်ခုက လက်ရှိအချိန်မှာ ဘာမှပြင်လို့မရတော့ဘူး။ ကျနော့် အနေနဲ့ တစ်သီးပုဂ္ဂလအဖြစ်ဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဆောင်ရွက်လို့မရတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ ကျနော့် အနေနဲ့ ဒီ သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းသွားမယ်။ အကယ်၍ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျနော်အနိုင်ရလာခဲ့တယ်ဆိုရင် ပါတီနဲ့ကျနော်ကြားမှာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမယ်။ ဒါပါပဲ။
UDP ပါတီက နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာတည်ဆောက်လာတဲ့ ယန္တရားကြီးပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးနေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေ အားလုံးမှာ ကျနော်တို့မြို့နယ်အားလုံးက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအားလုံးနဲ့ ကျနော်နဲ့ တစ်သားတည်းရှိနေပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော့်ကို တစ်စုံတရာထိခိုက်မယ်၊ ခက်ခဲမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေရှိ လာရင် ကျနော်တို့မြို့နယ်၊ ကျနော့်ပြည်နယ်က UDP ပါတီဝင်တွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအသီးသီးကလည်း ကျနော်နဲ့တစ်သားတည်းရှိပါတယ်ဗျ။
ငြမ်းမီဒီယာ – တခြားသီးခြားဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိရင်လည်း ပြောပေးပါဦး။
UGN – သီးခြားပြောချင်တာကတော့ အားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးမှစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ၊ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒုတိယအကြီးဆုံးပါတီတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတော့ အဲဒီအဆင့်အရ ပိုပြီးကြီးမားလာတာပေါ့။ ယခင်ကသတိမထား မိကြပေမယ့် ယနေ့အချိန်မှာတော့ သတိထားမိလာကြတာကိုး။ အဲဒီအချိန်ကျတော့ မည်သည့်လွှတ်တော်၊ မည်သည့်ပါတီ၊ မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပဲဖြစ်ပါစေပေါ့၊ မိမိရပ်တည်နေတဲ့ပါတီတွေရဲ့ Leader တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့မေးခွန်းထုတ်ဖို့ ကျနော်တို့မှာ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ တောင်းဆိုသင့်ပါတယ်။ ဒါက နံပါတ် တစ်အချက်။
နောက်နံပါတ်နှစ်အချက်အနေနဲ့ကတော့ ကျနော် ဒီလိုတောင်းဆိုရတဲ့အကြောင်းဟာ လူထုတွေ ကြားမှာ ဒွိဟဖြစ်နေတဲ့အချက်ကို အမှန်တကယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားအောင် ကိုယ့်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်က ရှင်းလင်းဖော်ပြနိုင်မယ်လို့ ယူဆပြီး ကျနော်တောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်တယ်။
UDP ပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော့်အနေနဲ့ ပါတီကမသန့်ရှင်းဘူး၊ မကောင်းဘူးလို့ ယူဆနေတာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ ပါတီက ပြောသွားနိုင်မယ်လို့ ယူဆတဲ့ ကိစ္စကိုပဲ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ကျနော်ဖြေကြားသွားတာဖြစ်တယ်။ ဒါက သီးခြားဖြည့်စွက်ပြောချင်တဲ့ နှစ်ချက်ပေါ့။
Tags: UDP, ကချင်, ကိုယ်စားလှယ်လောင်း, ပါတီ, ရွေးကောက်ပွဲ